'Sabboonummaa Oromummaa Paan Afirikaaniizimii waliin walqabsiisuu' - BBC News Afaan Oromoo
'Sabboonummaa Oromummaa Paan Afirikaaniizimii waliin walqabsiisuu'
Madda suuraa, OPDO Official
DHDUO kora isaa 9ffaa magaalaa Jimmaatti taasisaa jiru irratti kan kanaan dura hin turre argamaafi dhaga'amaa jira. Maqaa, asxaafi faaruu jijjiiruurra darbee sagantaa siyaasaa haarawaa tolfachaa akka jiran namoonni taateewwan siyaasaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru itti dhiyeenyaan hordofan ni dubbatu.
Keessattuu haasawaan Dura Ta'aan DHDUO fi Ministirri Muummee Dr. Abiy yeroo yaa'ichi banamu taase jijiiramni jiraachuu agarsiiseera. Kanarratti BBC Afaan Oromoo xiinxalaa siyaasaa Obbo Girmaa Guutamaa dubbiseera.
Dhaabbileeniifi namoonni maqaa Oromootiin gurmaa'aniis ta'e dhuunfaadhaan hojjetan kan irratti argaman waan ta'eef yaa'iin DHDUO 9ffaa kan tokkummaati jechuun ni danda'ama, jedha Obbo Girmaan.
Kana males haasawaa Dura Ta'aan DHDUOfi Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad akkasumas Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa taasisanis waan tokkummaa ture jedha Obbo Girmaan.
"Fakkeenyaaf kan Ministirri Muummee Dr. Abiy aadaa Gadaatti deebinee yoo tokkummaa Oromummaa keenya jabeeffanne rakkoo keenyarra dabarree kan Afirikaallee hiikuu ni dandeenya kan jedhe akka aadaafi sabbuunummaa keenyatti deebinu waan godhuuf dubbii isaa kana hedduu jaalladheera."
Obbo Girmaatiif ergaan Dr. Abiy paartileen Oromoo kudha afur ta'an akka walitti dhufanii partii lama ykn sadiitti gurmaa'uudhaan yaada uummanni bitachuu danda'u dhiyeessuu qaban itti himeefi ta'uu baannaan jijjiirama isaan fiduu danda'an akka hin jirre akeekkachiisan waan bareedaadha.
Akka Obbo Girmaatti kan Pirezedaanti Lammaa dabalatee ergaa jajjabduutu darbe.
Hojii tokkummaa Oromoo akka ititu taasisan hojjetamaa jiran keessaas sabaafi sablamoota Oromiyaa keessa jiran ofitti qabnee jaalalaafi kabajaan keessumsiisuun waan yeroo ammaa mumullachaa jiru mo'achuu akkaataa itti danda'amu dhaamsa dabarsuun isaaniis jaallatamaa ture jedha Obbo Girmaan.
Seenaa keessatti DHDUO yaa'ii isaarratti warren isa deggeran qofa akka hafeeru kan dubbatu Obbo Girmaan, paartilee morkattootaa akkasitti walitti qabuun kun isa jalqabaati.
Paartileen morkattootaa ABO, KFO, ADOfi kanneen biroo kora kanarratti argaman ergaa waa'ee tokkummaa, walgargaaruufi waldhaggeeffachuun hojjechuuf akka fedhan irratti mullisan ture jedha Obbo Girmaan. Walumaa galatti, fedhaafi dantaa sabaarratti shira xaxamu hunda tokkoomanii dura dhaabbachuudhaaf fedhii kan agarsiisan turan.
Jijjiirama maqaafi hasxaa akkasumas faaruu DHDUO'n taasisaa jiru waan gaarii akka ta'e kaaseera xiinxalaan kun.
"Tarii sagantaa siyaasaa isaanii keessattis sabboonummaa Oromummaa kana Paan Afirikaaniizimii waliin walqabsiisna jedhan. Anaaf DHDUO deebistee of uumte natti fakkaata," jedha Obbo Girmaan.
Kora DHDUO 9ffaa kanarratti dubbiiwwan ijoo Dura Ta'aan Dhaabbatichaafi Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimed kan dubbatan keessaa:
Biyya ni ijaarra kana gochuurraas humni nu dhaabu tokkollee hin jiru.
Oromoon hammachuufi gudifachuu nu barsiise.
Oromoon yoo waraanatti ba'e hinjifachuu malee ajjeesuu nu hin barsiifne.
Tokkummaa biyya kanaa eegsisuudhaaf Oromoon itti-gaafatamummaatu irra jira.
Jaarraa amma keessa jiru kana keessatti tarsiimoo kaleessaatiin mo'achuun hin danda'amu.
Warreen biyya bulchuu hin danda'an nuun jedhan jiru, Oromoon biyya bulchuu qofaa osoo hin taane biyya ijaaruu ni danda'a.
Oromoon akkuma Sirna Gadaa addunyaatiif kenne, falaasama haaraa yeroo dhiyootti Itoophiyaafi Afirikaaf kennee isinitti agarsiisuu barbaada.
Waraanaa kan miidiyaarraa, kan dirree waraanaafi kan dinagdee gaggeessuu waan dandeenyuuf diinonni keenya si'a lama sadii irra deebitanii yaadaa isiniin jenna.
Warreen diina waliin hiriiruun qabsoo Oromoo duubatti deebisuuf hojjetan yoo jiraattan diinarraa adda baasnee isin hin ilaallu.
Ol-aantummaa seeraa kabachiisuu eenyuttuu dabarsinee hin kenninu.
Kanaan booda maqaa Oromootiin daldaluun hin danda'au.
Oromoon xawalwaallee hin jaallatu.
Lammileen Itoophiyaa hunda waliin waltumsinee hojjechuu qabna.
Oromummaan waan hedduu nu barsiiseera, akkaataa Sirna Gadaatiin sabaafi sablammoota hammannee waaliin taanee hojjechuun nurraa eegama.
Yaada mo'ataa qabachuu feesisa kanneen jedhan ture.
Sabboonummaan Oromoo uffata aadaa akkamiin ammayyeesse?
21 Onkololeessa 2020
Qorataan Internaashinaal Kiraaysiis Giruup (ICG) turtii Maqalee tibbanaatiin maal taajjabe?
Leegoositti namoonni mormiif bahan ajjeefaman
Kabajamuu dhabuu ajaja manneen murtiirratti akeekkachiifni MM bu'aa qabatamaa fidaa?
20 Onkololeessa 2020
Waldhibdee Mootummaa Federaalaa fi Tigraay furuurratti qoodni paartilee siyaasaa maali?
19 Onkololeessa 2020
Dhimma dhukkuba ijaa Obbo Baqqalaa Garbaarratti maaltu jedhame?
Viidiyoo, Weerara awwaannisaa qonnaan bultoota goolaa jiru, Turtii 1,05
16 Onkololeessa 2020
'Ajaji mana murtii kabajamuu dhabuun olaantummaa seeraa gaaffii keessa galchaa jira'
'Guyyaatti dirooniin giddugaleessaan lafa hektaara 65 irratti biifti’
'Olaantummaan afaan saba tokkoo aadaa saba kaanii balleessaa jira'
18 Onkololeessa 2020
Ajjeechaa Hacaaluun kanneen himataman mana murtiitti ‘yakkicha hin raawwanne’ jedhan
14 Onkololeessa 2020
Ajjeechaa Jamaal Kaashogjiin walqabatee ilma mootii Sa’udiiratti himatni baname
Xiinxalaan siyaasaa viidiyoo konfaraansiirratti qaama saalaasaa qaqqabaa mul'ate dhiifama gaafate
Pirezedant Tiraamp herrega baankii Chaayinaatii qabaachuu amanan
Dhimmoota Tiraampiifi Baayidan adda baasan saddeet
Ilaalchi ummanni waa'ee hogganaa isaa qabu attamiin safarama?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 2 Ebla 2019
'Yeroo namni kiisii namaa keessatti kajeelutti amanamaa ta'ee argamuun na boonse'
UKn namoota fayyaa Covid-19n akka 'qabaman gochuuf'